I-Woodshack - indawo yokuzimela yabucala eMapua - I-Airbnb
I-Woodshack - indawo yokuzimela yabucala eMapua
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMelonie
Indawo ekhethekileyo, ihombiso entle, eyenziwe ngesandla ngokunyamekela ngothando. Ifakwe entliziyweni yeMapua, indawo ezolileyo, ezolileyo yokuphumla okanye ujonge indawo. Izibonelelo zeti kunye nekofu, kunye ne-oven ye-bench-top for self-catering. Ibhedi yosuku inokulala umntu owongezelelweyo ukuba kuyimfuneko (buza kumnini). Inkonzo yokuhlamba iyafumaneka.
Indawo yokuhlala ezimeleyo kunye neyabucala eyahlukileyo kwindlu enkulu apho kuhlala abanini. Indawo yokuhlambela kunye nekhitshi. Indawo yokulala yahlulwe ukusuka kwindawo yokuhlala (hayi igumbi elahlukileyo). Ibhedi yosuku ingasetyenziselwa njengebhedi yomntu wesithathu okanye umntwana. Ukuhlobisa okuhlukileyo kunye nokuseta okutofotofo, isiseko esifanelekileyo sokujonga indawo entle yeTasman.
I-Mapua yindawo ekusingwa kuyo iiholide, yaziwa kakhulu ngendawo yayo ye-buzzy wharf, ukhetho olukhulu lweekhefi kunye neebhari kunye neendawo zokutyela kumgama nje wemizuzu embalwa. Uhambo olufutshane ukuya kwelinye icala lukusa kwilali yaseMapua enendawo yokubhaka edumileyo, iSuperette, ikhemesti kunye nevenkile yezipho. Ekupheleni kweSitrato saseTahi, uya kufumana ipaki enemibono emangalisayo yechweba kunye neentaba.
Umniniyo uhlala kwipropati kwindlu enkulu, kwaye iindwendwe zishiywa ngasese ngaphandle kokuba zifuna nantoni na. Nditsalelwa umnxeba okanye ndithumele umyalezo kwaye ndiyavuya ukunceda apho ndikwazi khona.